कार्तिक २१ देखि २७ सम्मको साप्ताहिक रा’शि’फ’ल हेर्नुहोस् – Krazy NepaL
कार्तिक २१ देखि २७ सम्मको साप्ताहिक रा’शि’फ’ल हेर्नुहोस्
November 8, 2021 1138
कार्तिक २१–२७, २०७८
प्रारम्भमा परिस्थिति अनुकूल नदेखिए पनि मिहिनेतले सफलता दिलाउन सक्छ। बुद्धिको उपयोगले चुनौतीहरूलाई पन्छाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा भाग्यले साथ दिनेछ। अप्ठ्यारो अवस्थामा गरिएको पुरुषार्थले कीर्तिमानी समेत दिलाउन सक्छ। गहिरो अध्ययनले पनि समस्या समाधान हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनामा दिलाउन सक्छ। सप्ताहान्तमा केही समस्या देखिए पनि आयस्रोत बढ्नाले मनग्य धनलाभ हुनेछ।
सुरुमा प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। सहयोगीहरूको साथ जुट्नेछ। व्यापार बढ्नेछ। रमाइलो यात्राका बीच आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइनेछ। साेमवार र मंगलवार भने शाारीरिक वा मानसिक रूपमा केही कमजोर भइनेछ। अर्थअभाव देखिए पनि सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ र भाग्यले साथ दिनेछ। कर्मयोगले उचाइको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। आलोचकहरूले केही व्यवधान गरे पनि मिहिनेतले कीर्तिमानी दिलाउनेछ।
द्वन्द्व बढे पनि प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नाले काममा उत्साह जाग्नेछ। शत्रु र रोगबाट मुक्ति मिल्नेछ। मिहिनेत गर्दा राम्रै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। अध्ययनका सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले हर्ष बढ्नेछ। व्यापार बढ्नाले आयस्रोत सबल हुनेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान र स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। बुधवार र बिहीवार भने स्वास्थ्य र आम्दानीमा बाधा पुग्न सक्छ। अप्ठ्यारो पर्दा एक्लो भइनेछ। सप्ताहान्तमा स्थिति अनुकूल बन्नेछ।
सुरुमा केही व्यवधान देखिए पनि साता उत्साहवर्धक नै रहनेछ। अध्ययनमा ध्यान नपुगे पनि मिहिनेतले सफलता दिलाउनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा सहयात्रीहरूलाई सजिलै उछिन्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। शत्रु र प्रतिस्पर्धी पछि पर्नेछन् भने बाधाहरू स्वतः हट्नेछन्। रचनात्मक कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिलो हुनेछ। भोगविलास र भेटघाटले खर्च निम्त्याउनेछ। सप्ताहान्तमा स्वास्थ्य कमजोर बन्नाले काम रोकिन सक्छ।
सुरुमा घरेलु समस्याले अल्झाउन सक्छ। आफ्ना कमजोरी बाहिरिनाले अवसरवादीहरूले मौकाको फाइदा उठाउन सक्छन्, गोपनीयतामा सजग रहनुहोला। साेमवारदेखि परिस्थिति केही अनुकूल बन्नेछ र केही अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। लगनशीलताले पढाइको स्तरमा सुधार ल्याउनेछ। विदेश ताक्नेहरूलाई सम्भावनाकाे ढाेका खुल्नेछ। आँटले काम सम्पादन हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। सप्ताहान्तमा मित्रता र प्रेमकाे बन्धन कसिलाे हुनेछ। रमाइलाे यात्रा हुनेछ।
मंगलवारसम्म अलि सावधानीसाथ काम गर्नुपर्ला। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्न सक्छ। आफ्नैबाट धोका पाइने समय रहेकाले सावधान रहनुहोला। अरूको भरपर्दा काम रोकिन सक्छ। बुधवारदेखि शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नेछ। काममा लगनशीलता बढ्नेछ। नाम र दाम पनि हातलागी हुनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र प्रतिस्पर्धीहरू पनि पछि हट्नेछन्। व्यापारमा मनग्य फाइदा हुनेछ। प्रशंसकहरू आलाेचककाे प्रभावमा पर्नाले विराेधमा उत्रन सक्छन्।
सुरुमा काम गरेर दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिनेछ। बाेलीकाे प्रभाव बढ्नाले व्यवसायमा पनि फाइदा हुनेछ। नयाँ स्थानकाे यात्रा हुन सक्छ। आँटले काम सम्पादन हुनेछ्न्। बुधवारदेखि भने गाेपनीयतामा सावधान रहनुहाेला। परिवारमा असमझदारी बढ्नेछ भने आलोचकहरूले पनि दुःख दिनेछन्। तापनि सहयोगीहरू जुट्नाले धेरै काम बन्नेछन्। लगनशीलताले सफल भइनेछ। अध्ययनकाे लगावले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ।
बोली र व्यवहारले धेरैलाई प्राभावित पार्न सकिनेछ। कामको प्रभावले विशेष अवसर दिलाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र लेखन कलामा पनि निखारता आउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नेछन्। विभिन्न भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। सहयाेगीहरूले साथ दिने हुँदा नयाँ कामतर्फ आकर्षित भइनेछ। सप्ताहान्तमा भने पारिवारिक माहाेल अनुकूल नहुनाले काममा समेत बाधा पर्न सक्छ। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। बुद्धिको उपयोगले सफलता प्राप्त हुनेछ।
प्रारम्भमा खर्च बढ्नेछ भने कामकै लागि केही माेटाे रकम खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। आइतवार, बुधवार र बिहीवार काममा दौडधुप गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने अवसर भने प्राप्त हुनेछ। बाँकी समय उत्साहवर्धक रहनेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। अध्ययनले प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ। स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। अध्ययनले प्रगतिको उचाइमा पुर्याउनेछ। प्रतिस्पर्धाले पनि व्यवसायमा प्रगति गराउनेछ ।
उठ्ने रकम हातलागी भए पनि याे साता खर्चिलो हुने देखिन्छ। सामान्य आम्दानी भइरहनेछ र थप रकम जोहो गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। साेमवार र मंगलवार सरसापटमा धन बाहिरिन सक्छ। आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउनेछन्। खर्च लागे पनि विदेश ताक्नेहरूका लागि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। बुधवारदेखि रोकिएका काम बन्नुका साथै कर्मयोगले उचाइको बाटो समाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने छोटो समयमा नाम र दाम हातपार्न सकिनेछ।
केही विवादास्पद काम गर्नुपरे पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आँटले काम बन्नेछ भने मेहनत गर्दा मनग्य आर्जन हुनेछ। साेमवार र मंगलवार आयस्राेत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। विद्यार्थीका लागि नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बुधवारदेखि धन बाहिरिन सक्छ। तापनि विदेश ताक्नेहरूलाई यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। खर्च बढ्नेछ र काम दोहोर्याउनु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सप्ताहान्तमा पारिवारिक भेटघाटले मन रमाउनेछ।
प्रारम्भमा स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन सक्छ। काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि परिनेछ। चुनौती देखिए पनि बिस्तारै परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। साेमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। सानाे प्रयत्नले उपलब्धि हातलागी हुनेछ। तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ। नोकरी तथा दिगो काम प्रारम्भ हुन सक्छ। बुधवारदेखि मनग्य आम्दानी हुनेछ। सप्ताहान्तमा भने खर्च बढ्नेछ। लामो यात्रा र आर्थिक लगानी गर्ने अवसर जुट्नेछ।
Prevआज कार्तिक २२ गते साेमवार ,निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
Nextपेट लाग्यो ? नआत्तिनुस् यस्ता छन सजिलै पेट घटाउने ८ तरिका !
“जनकपु’रमा दीपा’वली पर्व सकेर मिथि’लाका बासि’न्दा अब लोक’आस्था’को पर्व छठको तयारी जुट्दै”
बिहान उठ्दा श्रीमति सधैं थकित हुन्थिन्, रातभरको घटना सिसिटिभी क्यामेरामा हेर्दा पति पनि अचम्ममा (भिडियो हेर्नुहोस्)